Ukuhlolwa Kokukhulelwa: Izinhlobo, Imiphumela Nokunemba - Gynaec
Ukuhlolwa Kokukhulelwa: Izinhlobo, Imiphumela Nokunemba
Akubona bonke abesifazane abafuna ukuba ngumama, kepha sonke sifuna ukuqiniseka ngokukhulelwa. Uma sengikushilo lokho, ukukhulelwa nezindlela zokukuthola kungaba yinto emangazayo nesabisayo kwizizathu eziningi zabesifazane abaningi. Ngenxa yengcindezi enkulu, ukungaqiniseki, futhi kwesinye isikhathi ukuphazamiseka ngokomzimba nangokomzwelo okuhambisana nalesi sinqumo esiguqula impilo kungaba nzima kakhulu ukuthatha, ikakhulu uma kungenzeka ukuthi uwedwa kulo mgwaqo.
Kunezinto eziningi umuntu okudingeka azibone ngaphambi kokuthenga ukuhlolwa kokukhulelwa njengezindleko zokuhlolwa, ukunemba, uhlobo, imiphumela yokuqala njll. Sijula ​​ngokujulile kukho konke odinga ukukwazi ngokuhlolwa kokukhulelwa.
Ukudla kokumisa izinwele kwehla ngokwemvelo
1. Ziyini Ukuhlolwa Kokukhulelwa?
ezimbili. Yiziphi Izimpawu Zokuqala Zokukhulelwa?
3. Izinhlobo Zokuhlolwa Kokukhulelwa Ziyatholakala
Isine. Yini Ongayilindela Ezivivinyweni Zokukhulelwa Ezisuselwa Emchameni?
5. Kusho Ukuthi Okuhle Noma Okubi Kusho Ukuhlolwa Kokukhulelwa
6. Kubiza Kangakanani Ukuhlolwa Kokukhulelwa?
7. Ukunemba Kokuhlolwa Kokukhulelwa
8. Imibuzo Evame Ukubuzwa Ekuhlolweni Kokukhulelwa
Ziyini Ukuhlolwa Kokukhulelwa?
Uma uphuthelwe yisikhathi sakho noma uqaphele ezinye izimpawu zokukhulelwa, ukuhlolwa kokukhulelwa kuyindlela enembile nelula yokuthola ukuthi ukhulelwe. Ukuhlolwa kokukhulelwa kubheka i-hormone ethile emchameni wakho obizwa nge-Human Chorionic Gonadotropin (HCG). Umzimba wakho wenza le hormone kuphela uma ukhulelwe. Le hormone ikhiqizwa ku-placenta esakhulayo lapho kufakelwa iqanda elikhulelisiwe emgqeni wesibeletho ezinsukwini ezimbalwa zokuqala ngemuva kokukhulelwa.
Uhlobo lohlobo: Thatha ukuhlolwa kwakho kokukhulelwa kuqala ekuseni.
Yiziphi Izimpawu Zokuqala Zokukhulelwa?
Qaphela lezi zimpawu ezibonakalayo ezivame kakhulu ku- ukukhulelwa kusenesikhathi . Nazi izimpawu eziyisikhombisa ezivame kakhulu nezikhulelwe ongazitshela:
Uhlobo lohlobo: Iningi labesifazane lizwa ukuthi izimpawu zabo zokukhulelwa zivame ukukhahlela ngempela ezinsukwini ezinhlanu noma eziyisithupha zokukhulelwa.
Izinhlobo Zokuhlolwa Kokukhulelwa Ziyatholakala
Kunezinhlobo ezimbili zokuhlolwa kokukhulelwa okutholakala emakethe - ukuhlolwa kwegazi nokuhlolwa komchamo.
Uma ufuna ukuthola ukuthi ukhulelwe yini ngokuhlolwa kwegazi, ungavakashela umtholampilo we-gynaecologist ukuze kwenziwe ukuhlolwa. Ukuhlolwa kwegazi kuvame ukubhekwa njengendlela eqinisekile yokunquma ukukhulelwa. Kunezinhlobo ezimbili zokuhlolwa kwegazi lokukhulelwa, ukuhlolwa kwegazi okulinganiselwe okulinganisa inani le-HCG egazini lakho kanye nokuhlolwa kwegazi kwe-HCG okukhombisa ukuthi i-hormone ikhona yini egazini noma cha.
Uhlobo lohlobo: Ukuhlolwa kwegazi ngeke kukunikeze imiphumela esheshayo njengoba uzohlolwa umchamo.
amathiphu okunciphisa ukuwa kwezinwele
Ukuhlolwa komchamo kuthola nokuthi kukhona i-HCG emchameni wakho. Ungahlola ngokusebenzisa inkomishi yomchamo noma ngokukhamela ngqo endukwini. Uzothola uhla lokuhlolwa komchamo olutholakala emakethe, kusuka ezivivinyweni ezikutshela izindaba ezinhle ezinophawu lokuhlanganisa nokuhlolwa kokukhulelwa kwidijithali. Ukuhlolwa komchamo kuyatholakala nasehhovisi likadokotela, okunenzuzo ngaphezu kokuhlolwa kwasekhaya njengoba udokotela engakuyala ukuthi usebenzise kanjani isivivinyo futhi wazise umphumela wokuhlolwa. Ukuhlolwa komchamo kukunikeza imiphumela esheshayo.
Uhlobo lohlobo: Ukuchama njalo kungavimbela ukuhlushwa kwe-HCG kusampula yakho yomchamo. Gwema ukuthatha amakhefu ejwayelekile lapho uhlela ukwenza izivivinyo.
Yini Ongayilindela Ezivivinyweni Zokukhulelwa Ezisuselwa Emchameni?
Imiphumela yokuhlolwa kokukhulelwa ingabonakala njengolayini, umbala noma uphawu olufana no - ‘+’ noma ‘-’ uphawu kumakhithi wokuhlola asekhaya athandwa kakhulu futhi atholakala kalula emakethe, ngaphezu kwekhawunda. Kukhona izivivinyo zedijithali ezitholakalayo emakethe, ezibonisa amagama athi 'angakhulelwe' noma 'ukhulelwe' kusibonisi senduku.
Uhlobo lohlobo: Gwema ukuphuza ithani lamanzi ngaphambi kokwenza isivivinyo sokukhulelwa ekuseni
Kusho Ukuthi Okuhle Noma Okubi Kusho Ukuhlolwa Kokukhulelwa
Kubalulekile ukwazi ukuthi kusho ukuthini umphumela omuhle noma ongemuhle. Uma uthola umphumela omuhle lokho kusho ukuthi ukhulelwe. Uma wenza isivivinyo kabili futhi uthola imiphumela ehlukile, udinga ukuxhumana nodokotela. Ukuhlolwa kwegazi kulesi simo kuwumqondo omuhle ukuqinisekisa umphumela.
Uma unezikhathi ezingajwayelekile kuzoba nzima ukwazi ukuthi uzohlolelwa nini ukukhulelwa. Kepha imiphumela yokulandela umkhondo we-ovulation ingasiza. Uma umhloli wakho we-ovulation ovulation uthola umphumela omuhle, ungahlola ukukhulelwa cishe ezinsukwini eziyi-10 kuya kwezingu-14 kamuva.
Ezimweni ezingavamile, ungathola umphumela wokuthola iqiniso okungelona iqiniso, okusho ukuthi awukhulelwe kepha isivivinyo sithi unguye. Kunezizathu ezimbalwa ngenxa yalokhu okungenzeka kube sengathi unamaprotheni noma igazi ku-pee yakho noma ezinye izidakamizwa ezinjengezidakamizwa ezithile, i-hypnotics, izidakamizwa zokuzala, njenge-tranquilisers kanye ne-anticonvulsants. Uma uqhubeka nokuthola imiphumela yokuhlolwa engemihle, kodwa isikhathi sakho asiqali, kungaba ngenxa yezici eziningi ezibandakanya isisindo somzimba esiphansi , ukuphazamiseka kwe-thyroid, ukuzivocavoca ngokweqile nokucindezeleka nezinkinga ngama-ovari akho. Uma ungakhulelwe udokotela wakho angakusiza ukuthi ubuyisele umjikelezo wakho esikhathini.
Uhlobo lohlobo: Uma uqhubeka nokuthola imiphumela yokuhlolwa engemihle, kodwa isikhathi sakho asiqali, kungaba uphawu lwesimo esithile sezempilo esiyimbangela. Thintana nodokotela ezimweni ezinjalo.
Kubiza Kangakanani Ukuhlolwa Kokukhulelwa?
Ukuhlolwa kokukhulelwa kuyatholakala ezitolo ezidayisa ukudla, ezitolo zezidakamizwa nasezitolo ezilula. Lezi zivivinyo ziyatholakala nabahlinzeki bezempilo, ubuzali obuhleliwe izikhungo nemitholampilo yomphakathi. Konke lokhu kuhlolwa kufana kakhulu. Amanani azoqala kusuka ku-Rs 100 kuya ku-200 esivivinyweni esisodwa. Ukuhlolwa kokukhulelwa ekhaya kutholakala kalula futhi kuyabiza kakhulu uma kuqhathaniswa nokuhlolwa kwegazi lokukhulelwa.
Ukuhlolwa kokukhulelwa kuyatholakala esitolo sezidakamizwa 99 amaphesenti wesikhathi. Lezi zivivinyo zinembe kakhulu uma uzithatha ngemuva kokuphuthelwa yisikhathi sakho. Ukuhlolwa kokukhulelwa kuzonemba kancane uma ungayisebenzisi ngendlela efanele noma kuphelelwe yisikhathi. Ngakho-ke funda ngokucophelela izinkomba eziza nokuhlolwa kwakho kokukhulelwa bese uhlola usuku lokuphelelwa yisikhathi. Lapho wazi ngaphambilini ukuthi ukhulelwe ngokushesha ungathola ukunakekelwa okudingayo ukuze uhlale uphilile. Kwesinye isikhathi ukuhlolwa kokukhulelwa kungathola amahomoni wokukhulelwa emchameni wakho ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kocansi olungavikelekile. Ezinye izivivinyo ezikhethekile ziyakwazi ukubona ukukhulelwa ezinsukwini eziyisithupha ngemuva kwesikhathi esilahlekile.
Uhlobo lohlobo: Uma uhlola kusenesikhathi, ukuhlolwa kuzoba ngokunembe kakhudlwana ngoba i-ovulation ayihambisani kahle inyanga nenyanga futhi ukufakelwa kungahluka ngezinsuku ezimbili noma ezintathu ngemuva kokukhulelwa.
Ukunemba Kokuhlolwa Kokukhulelwa
Akudingekile ukuthi izivivinyo ezibizayo zinembe kakhudlwana. Yize zingaba nezici ezahlukahlukene, lezi zivivinyo ziyefana nalezi ezisetshenziswa emtholampilo kadokotela. Ochwepheshe abaningi abaphindi ngisho ukuhlolwa kokukhulelwa uma ungena emahhovisi abo uhlolwe ukukhulelwa ekhaya obekutholile.
Izimpawu zokukhulelwa zingahluka kowesifazane ohlukile. Kungahluka ngokuqina nekhwalithi ngisho nowesifazane ofanayo angathola izimpawu ezahlukahlukene kukho konke ukukhulelwa. Omunye wesifazane angathola izimpawu ngaphakathi kwe-trimester yokuqala yokukhulelwa kwabo kanti abanye bangase babe nezimpawu kamuva. Ezinye izimpawu zakuqala zingabandakanya ukungabikho esikhathini, ukukhuluphala kwesisindo, ukushintsha kwemizwelo, ukwanda kokuchama, amabele abuhlungu, isicanucanu noma ukugula kwasekuseni, ukufakelwa kwegazi ukufakelwa, ukuphazamiseka kokudla, ukuqunjelwa, ukuqunjelwa nokunye okuningi. Ukukhulelwa uhambo lomuntu siqu futhi kuyehluka kubo bonke abesifazane.
Uhlobo lohlobo: Izidakamizwa zokuzala neminye imishanguzo ene-hCG nayo ingakhuphula amazinga ale hormone. Xhumana nodokotela.
Imibuzo Evame Ukubuzwa Ekuhlolweni Kokukhulelwa
U. Ingabe ukuphuza uketshezi oluningi kungayithinta imiphumela yami yokukhulelwa?
TO. Yebo, kubalulekile ukuthi ungaphuzi kakhulu noma yiluphi uketshezi olufaka amanzi noma utshwala ngaphambi kokwenza ukuhlolwa kokukhulelwa. Njengoba kungcono ukulinda kuze kube yilapho ngokwemvelo udinga ukuchama. Ngale ndlela uzoba gwema ukunciphisa izinga lakho lokukhulelwa i-hormone nokuthola umphumela ongewona wamanga.
ungamisa kanjani izinwele ezinzima ukuwa ngokushesha
U. Ingabe kufanele usebenzise umchamo wokuqala ekuseni ukuhlola ukukhulelwa?
TO. Ukuhlolwa kokukhulelwa kusetshenziselwa ukuncoma ukusebenzisa i-pee yakho yokuqala yasekuseni lapho izinga le-HCG lingaphezulu. Kepha manje sezizwela ngokwanele futhi lokho akudingekile, yize kuyasiza uma uthatha isivivinyo kusenesikhathi.
U. Kukhona yini okungaphazamisa imiphumela yokukhulelwa ekhaya?
TO. Iningi lemithi, i-counter-the-counter kanye nemithi kadokotela, kufaka phakathi amaphilisi okulawula ukuzalwa kanye nama-antibiotics, akufanele kuthinte imiphumela yokuhlolwa kokukhulelwa ekhaya. Imithi ene-hormone ekhulelwe i-HCG kuphela enganikeza imiphumela yokuhlolwa eyiphutha. I-positive yamanga yilapho ukuhlolwa kuthi ukhulelwe kanti awukhulelwe. Kwesinye isikhathi imishanguzo equkethe i-HCG isetshenziselwa ukwelapha ukungabi nenzalo (ukungakwazi ukukhulelwa). Izidakamizwa notshwala ezingekho emthethweni azithinti imiphumela yokukhulelwa. Kepha abesifazane abangakhulelwa akufanele basebenzise lezi zinto.
Funda futhi: Nayi eminye imithwalo ongayilandeli ngesikhathi sokukhulelwa kokuqala
amakhambi enziwe ngokwenziwa kokuwa kwezinwele nodaka
amathiphu wobuhle usebenzisa i-baking soda
umuthi wokwelashwa kwezinwele
#FitnessForSkincare: Izimo ze-7 Zesikhumba Esikhanyayo
Inkulumo Yesazi: Yenza Utshalomali Olususelwa Emigomweni
UKUQHUBEKA: UMeghan Markle noPrince Harry Bare All With Oprah Winfrey!
Ukuqaphela Imikhiqizo Engcono Kakhulu Yezobuchwepheshe eNdiya